Saamaynta placebo Miyey Sababtaa Faa'iidooyinka Microdosing ee Maskaxda? • Dawooyinka Inc.eu
Saamaynta placebo miyuu keenaa faa'iidooyinka microdosing-ka oo leh cilmu-nafsiyeed?
Daraasad ugu horreysa oo ku saabsan suurtagalnimada saameynta placebo ee microdosing. Daawooyinka cilmu-nafsiga sida 'LSD' ama walxaha firfircoon ee likaha sixirka ayaa laga yaabaa inay bixiyaan faa'iidooyin maskaxeed sababtoo ah saameynta placebo.
Microdosing waa erey loogu talagalay marka dadku si joogto ah u isticmaalaan qaddar yar oo daroogo ah, sida LSD. Isticmaalayaashu waxay yiraahdaan taasi kama sarreyso iyaga, laakiin inay yihiin kuwo hal abuur badan, fiiqan, ama si uun u wanaajinaya caafimaadkooda maskaxeed. Waxay qaadan karaan 10 ilaa 20 boqolkiiba qiyaas caadi ah dhowr jeer usbuucii.
Cilmi-baarista qaarkood waxay soo jeedinaysaa qiyaaso waaweyn maskaxiyan kaa caawin kara yareynta walwalka, niyadjabka iyo cudurada kale ee maskaxda. Laakiin microdoses waxaa kaliya lagu tijaabiyay daraasado yar yar, oo lagu xakameeyo placebo, oo leh natiijooyin isku dhafan. Saamaynta placebo waa marka dadku ay ka helaan faa'iidooyinka jirka ama maskaxda ee daaweynta caafimaadka awgood rajada.
Hab cusub oo lagu baaro saameynta placebo
Sababtoo ah way adag tahay in la helo oggolaansho ku saabsan cilmi baarista ku lug leh dadka qaata daroogooyinka sharci darrada ah, Balázs Szigeti oo ka tirsan Imperial College London iyo asxaabtiisa ayaa la yimid qaab tijaabo ah oo aan caadi ahayn. Waxay adeegsadeen gole internet si ay ula xiriiraan dadka guriga badanaa microdosing leh LSD, xarunta likaha sixirka psilocybin ama dawooyin la mid ah, kuwaas oo badanaa lagu iibsado internetka. Cilmi baarayaashu ma falanqeyn farqiga u dhexeeya saameynta ku saleysan daawooyinka kaqeybgalayaashu qaadanayaan.
Hab cusub oo lagu baaro saameynta placebo (Berdihii.)
Kaqeybgalayaashu waxay ku heleen kaabsoolo caafimaad oo faaruq ah boostada inay furan karaan si ay u geliyaan gabal yar oo warqad uur leh ah. Markii la xiray mar labaad, kaniiniyada la raray waxay u ekaayeen kuwa madhan. 191 mutadawiciin ah ayaa daroogada galiyay qaar ka mid ah kaabsooradooda, ka dibna ku riday qaybo fara badan oo baqshado ah oo wata lambarrada QR waxayna ruxeen baqshadaha si aysan mar dambe u ogaan waxa daawooyinka ku jira.
Seddex meelood meel ka mid ah kaqeybgalayaashu waxay kaliya qaateen daawada microdoses muddo afar toddobaad ah, seddex meelood meel waxay heleen kaabsoosha placebo halka midkalena uu helay nus iyo bar. Tabaruceyaashu ma ahayn inay awoodaan inay sheegaan waxa ay ka qaadayaan baqshadaha, laakiin cilmi baarayaashu waxay awoodeen inay ogaadaan iyagoo falanqeynaya lambarrada QR dhammaadka tijaabada.
Tabaruceyaashu waxay sidoo kale qaateen imtixaanno ujeedo ah oo toos ah oo internetka ah si loo cabiro maskaxda maskaxeed waxayna kajawaabeen su'aalo ku saabsan shaqadooda iyo khibradooda, sidoo kale waxay duubeen mala-awaalkooda ku saabsan inay qaateen daroogada ama daroogo. placebo qaatay.
Dhammaan saddexda kooxba waxay la kulmeen horumarin isku mid ah natiijooyinkooda muddada-dheer ee cilmi-nafsi iyo garasho ee afarta toddobaad.
Dadka qaata daroogada dhabta ah waxay muujiyeen faa iidooyin “aan caadi aheyn” oo ku saabsan niyadda iyo hal-abuurka jawaabahooda sahaminta ee tijaabooyinkii la qaaday dhowr saacadood ka dib maamulka, Szigeti ayaa leh, laakiin kaliya imtixaanada shaqsiyeed. Wax faa iido ah laguma arag imtixaanada ujeeddada laga lahaa.
Intaa waxaa sii dheer, saameyntan waxaa si aad ah loogu cadeeyay dadka si fiican u qiyaasey inay daawada dhabta ah iska daayeen, laga yaabee inay tahay saameyn yar oo la dareemi karo, oo soo jeedinaysa in xitaa faa'iidooyinkan yar yar ay ugu wacan tahay jawaab celinta placebo, Szigeti ayaa leh.
Laakiin tijaabadu ma noqon karto ereyga ugu dambeeya ee microdosing, qayb ahaan maxaa yeelay tabaruceyaashu ma kormeerin rugo caafimaad.
Qof kastaa wuxuu ka yiraahdaa microdosing-ka taasna waa midaan cilmi ahaan dooneyno inaan ogaano.
Bernhard Hommel oo ka tirsan Jaamacadda Leiden ee Holland ayaa sheegay in tijaabada sidoo kale laga yaabo inay heshay saameyn badan haddii cilmi baarayaashu ay ku cabireen hal-abuurka dadka tijaabooyin ujeedo leh, halkii ay dadka si fudud u weydiin lahaayeen inay dareemayaan hal abuur.
"Ku guuleysiga daraasaddan waxay dhiirrigelin kartaa daraasado la mid ah noocyo kala duwan oo cilmiyaysan ama xaalad caafimaad," ayuu yiri qoraaga sare ee daraasadda, David Erritzoe, oo ah bare sare oo caafimaad oo cilmiga maskaxda ka dhiga Imperial College London. Tixgelinta saameynta placebo waa muhiim marka la qiimeynayo isbeddellada sida isticmaalka cannabidiolsaliidaha, cuntada fadhida, ama kaabisyada meesha cadaadiska bulshada ama filashooyinka isticmaaleyaasha ay u horseedi karto jawaab celin xoog leh Hindisaha sayniska ee is-indho-tirinta ah waxaa loo isticmaali karaa qiime jaban, qalab baaris bilow ah ka hor inta aan la bilaabin tijaabooyin caafimaad oo qaali ah. “
Ilaha ao Dib u eegista Daawada Yurubta (EN), Waqtiga Maaliyadeed (EN), NewScientist (EN), TheGuardian (EN)
daroogadamicrodosingmicrodosingNederlandcilmi baarismaskaxiyandawooyinka caqliga lehBoqortooyada Ingiriiska
Mar baa la rumeysnaa in waalidiinta caba marijuana aysan ku habboonayn korinta carruurtooda ...
Daraasad cusub ayaa soo jeedinaysa in terpenes iyo CBD 2X ay sifiican ugu shaqeeyaan xanuunka 'covid-19 inflammation' marka loo eego corticosteroids
Dagaalka ka dhanka ah Covid-19, duufaanka cytokine waa mid ka mid ah arrimaha ugu halista badan ee ay dhakhaatiirtu la dagaallamaan ...